ओसाका जनवरीमा मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
Glico मैन बिलबोर्ड र अन्य रोशनी प्रदर्शन Dontonbori, Namba Osaka क्षेत्र, ओसाका, जापान मा। ओम्बा = शटरस्टकमा नाम्बा मनोरञ्जन क्षेत्रको रूपमा परिचित छ
यदि तपाईं जनवरीमा ओसाकामा बस्नुहुनेछ, तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि त्यस समयमा मौसम कस्तो छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई मौसमको बारेमा केहि विचारहरू दिनेछु। ओसाका, अन्य जापानी शहरहरु जस्तै, जनवरी को अन्त देखि फेब्रुवरी को शुरुवात मा वर्ष को सबैभन्दा चिसो मौसम हुनेछ। यस कारणका लागि, त्यहाँ जनवरीको शुरुमा नयाँ वर्षको बाहेक धेरै पर्यटकहरू छैनन्। ओसाकामा लगभग हिउँ छैन। दिनहरू घाममा पर्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले यदि तपाईं चिसोमा कडा हुनुभयो भने, तपाईं धेरै आरामसँग यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। ओसाकासँग धेरै तातो र स्वादिष्ट खाना छ, त्यसैले कृपया ती पनि रमाउनुहोस्!
ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। ओसाकामा मौसमका लागि तलका लिंकहरू पालना गर्नुहोस्।
तल जनवरीमा टोकियो र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ।
जनवरीमा ओसाकामा मौसम (अवलोकन)
ओसाका जनवरीको सुरूमा मौसम (२०१))
जनवरीको बीचमा ओसाका मौसम (२०१ 2018)
जनवरीको अन्तमा ओसाका मौसम (२०१ 2018)
ग्राफ: जनवरीमा ओसाकामा तापमान परिवर्तन
ओसाकाको मौसम अन्य जापानी शहरहरू जस्तै प्रत्येक वर्ष जनवरी र फेब्रुअरीमा चिसो हुन्छ। ओसाकाको टोकियो जत्तिकै उस्तै मौसम छ। यद्यपि जनवरीमा ओसाका टोकियो भन्दा थोरै चिसो छ।
ओसाकामा जनवरीमा कम वर्षा छ। यो भन्न सकिन्छ कि मौसम स्प्यासीe स्पट वरिपरिको यात्राको लागि उपयुक्त छ। जे होस्, यो चिसो छ, त्यसैले कोट वा जम्परहरू ल्याउन नबिर्सनुहोस्। यदि तपाईं धेरै लामो बाहिर बाहिर जानुहुन्छ, कृपया सावधान हुनुहोस् किनकि तपाईंको शरीर चिसो हुनेछ। जब शरीर शीतल हुन्छ, केहि तातो खाने वा तातो स्प्रि using प्रयोग गरेर प्रयास गर्नुहोस्!
ओसाकामा लगभग हिउँ परेको छैन, तर एकपटक यो पसेपछि रेल र बसहरूले ढिलाइ अनुभव गर्नेछन्। यदि यो सुन्न थाल्यो भने तपाईले धेरै बढ्नु हुँदैन।
जापान मौसम संघ द्वारा घोषणा गरिएको ओसाकामा जनवरीको मौसम जानकारी निम्न छ। कृपया आवश्यक अनुसार सन्दर्भ गर्नुहोस्।
न्यूनतम वायु तापमान 0.0
राम्रो मौसम अनुपात 36%
जनवरी २ २०१ 2: इकुकुनिटामा तीर्थ शिन्टो मन्दिर टेन्नोजी-कु, ओसाका प्रान्त, जापान = शटरस्टकमा अवस्थित छ
जनवरीको शुरुमा ओसाकामा, टोकियो र क्योटोमा जस्तै, मानिसहरू नयाँ वर्षको पूजाका लागि मन्दिर र मन्दिरहरूमा जान्छन्। तिनीहरू मध्ये धेरैले कोट लगाउँदछन्, ग्लोभ्स र मफलरहरू। ओसाका होक्काइडो जत्तिकै चिसो छैन, तर बिहान र साँझ न्यूनतम तापक्रम अझै फ्रिजभन्दा कम हुन सक्छ। मेरो सुझाव छ कि तपाइँले कोट तयार गर्नुहोस्।
यस समयमा ओसाकामा घमाइलो दिन रहनेछ र हिउँ पर्ने सम्भावना छैन।
जनवरीको सुरूमा, ओसाकामा सूर्योदय समय करीव :7:०06 हुन्छ र सूर्यास्त समय १ 17::01० हुन्छ।
न्यूनतम वायु तापमान -0.5
परिदृश्य दृश्य र जापानी रोचक संकेत Shinsekai क्षेत्र मा मान्छे र पर्यटकको भीड संग। ओन्सा, जापान = शटरस्टकमा शिन्सेकाई क्षेत्र एक पर्यटक लोकप्रिय गन्तव्य हो
जनवरीको मध्यमा, ओसाका बिहान र राती अझ चिसो हुनेछ।
त्यहाँ सामयिक न्यानो दिनहरू छन् तर अधिकतम दिनको तापक्रम प्राय: १० डिग्री सेल्सियस भन्दा कम हुन्छ।
तैपनि, ओसाकामा लगभग हिउँ छैन।
मध्य जनवरी, ओसाकामा सूर्योदय समय करीव :7:०05 र सूर्यास्त समय करिब १ 17:१० हुन्छ।
न्यूनतम वायु तापमान -2.5
जनवरी २,, २०१ 27, ओसाका कासल, ओसाका, जापान = शटरस्टकको छतमा टूरिस्ट
जनवरीको अन्तमा ओसाकालाई बिहान र साँझ शून्य डिग्रीभन्दा तल झार्नु असामान्य कुरा होइन।
कोट आवाश्यक हुन्छ किनकि यो दिनमा पनि चिसो हुन्छ, तर यस समयमा पनि यसले सास फेर्दैन। किनकि मौसम सफा छ, अग्लो भवनहरूको रातको दृश्य अति सुन्दर छ।
जनवरीको अन्तमा, ओसाकामा सूर्योदय समय करीव :7:०० र सूर्यास्त समय करिब १:01:२० हुन्छ।